Fernando Torres oo Toosh ku ifiyay halka uu aadayo Atlético marka uu ka tago!! – Gooldhalin
Fernando Torres oo Toosh ku ifiyay halka uu aadayo Atlético marka uu ka tago!!
Sida uu warinayo COPE, wakiillo ka socda koox Mareykanka ka dhisan ayaa ku sugan magaalada Madrid si ay ugala xaajoodaan laacibkan 34-jirka ah inuu aado Mareykanka.
Mustaqbalka laacibka Fernando Torres wuxuu u muuqdaa mid tegi doona Atlantic. Kooxda Atlético Madrid weeraryahankeeda ayaa horraantii xagaagan ku dhawaaqay inuu ka tegao naadiga, lamase shaacin kooxda uu aadayo keddib Atleti.’
Wakiillo ka socda Chicago Fire ayaa hadda ku sugan magaalada Madrid
El Niño wuxuu sii wadi doonaa inuu la jiro kooxdiisii carruurnimada, inta ka dhiman xagaagan. Torres ayaase horayba u sheegay in uu helay dalabaad dibadda ah, sida ay kasoo xigatay isaga COPE, durbadiiba waxaa billowday Wadahadal soo deg degay oo Chicago Fire, ay ku dooneyso in ay ku geyso isaga MLS waxaana kooxdaas hoggaamiya ninkii ay isku kooxda ahaan jireen ee Veljko Paunovic.
Chicago waxay wakiilladeedu joogaan Madrid waxayna dhammeystirayaan Saxiixa laacibkaas.
Torres wuxuu sidoo kale kula biirayaa Villa horyaalka MLS
Kooxo badan oo MLS ah ayaa lasoo saxiixday xiddigo badan oo Koofurta Ameerika iyo Yurub ka yimid, weliba waxay doonayaan in horyaalladooda ay xoojiyaan waana sababta aysan weli uga gaabineyn soo qaadashada ciyaartoy waaweyn. David Villa – Torres ayey ku wada jireen xulka Qaranka Spain – waana kabtanka kooxda New York City, wuxuuna aaday horyaalka United States keddib markii uu horyaalka la qaaday kooxda Atlético.
Zlatan Ibrahimovic wuxuu hadda joogaa LA Galaxy, halka Thierry Henry, Frank Lampard, iyo Steven Gerrard ay dhammaan kasoo ciyaareen MLS Sanadihii ugu dambeeyay.
Previous Previous post: Kabtanka kooxda Real maderid Sergio Ramos oo shegay in ay qadii karaan champions league xiliciyareedkan
Next Next post: Lewandowski mase Heynckes, Keebaa Qaldanaa, markii ay isku dhaceen Shalay?